एक नेपाली अर्को नेपाली भेट्दा किन बोल्न चाहदैन ? « Sansar News
एक नेपाली अर्को नेपाली भेट्दा किन बोल्न चाहदैन ?
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार ०९:३८
तर, बिभिन्न धर्म संस्कृती, बिभिन्न जात जाती नै किन नहोस्, बिदेशमा सबैले हामीलाई नेपाली नै भनेर चिन्दछन् । हामी देशका नेपाली दूत भएकाले हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रहन सहन र बोली भाषाले नेपाल र नेपालीको परिचय दिइरहेको हुन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । तसर्थ हामीहरू एक आपसमा मिलिजुलि बसेकै राम्रो तर यस्तो सोचे जस्तो काहा हुन्छ र एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई सहयोग चाहिदा सहयोग गर्नु पर्नेमा त्यस्तो खासै देखिदैन।
बिदेशमा रोजगारी गर्ने नेपालीहरूले एक नेपालीले अर्को नेपालीसँग एकआपसमा झुक्न जान्यो र सिक्न चाह्यो भने नेपाली जस्तोसुकै जोखिमपूर्ण काम गर्न सक्ने तथा आईपरेको जस्तोसुकै चुनौती पनी समना सजिलै गर्न सक्छ ।
बिडम्बना के भने, एक नेपाली अर्को नेपालीसँग झुक्न र सिक्न चाहदैन । बरू बिदेशीसँग चुक्छ अनी निउरीमुन्टी ‘न’ भएर झुक्छ । अली जान्ने बुझ्ने बरू आफुूलाई प्रभाबशाली ऊच्च ब्याक्तित्व ठान्दछ ।
मिडियम र निम्न खालका पनी आफूलाई देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग महिनावारी तलबको लेखाजोखा गरी ऊनीहरूको भन्दा धेरै तलब भत्ताखाई आफूलाई देशको सर्वमान्य नै ठानेको देखिन्छ । यस कारण बिदेशमा नेपालीहरू एकाआपसमा झुक्ने, सिक्ने कुरा त जहासुकै जावस एक आपसमा जम्का भेट हुँदा पनि खुलेर बोल्न चाहदैनन्। ।
जन्मभूमि नेपालको बिभिन्न भागबाट बैदेशीक रोजगारका लागि बिदेशीएपछि हामीहरूको पहिचान नै नेपाली हो । चाहे पूर्वी नेपालको होस्, चाहे पश्चिम, चाहे तराई होस् चाहे हिमाली पहाडी भाग नै किन नहोस् जहाँको भएपनी पहिलो नेपाल र नेपाली हो भनेर जान्न आवस्यक छ ।
बिश्वका अधिकांश देशहरूमा नेपालीहरू कार्यरत छन् । त्यस्तै गन्तव्य स्थान मध्यका मकाउ पनि एक हो । सन १९९६ साल देखिनै नेपालीहरूलाई रोजगारका लागि खुल्ला गरीएको चीनको स्वशासित क्षेत्र मकाउमा लगभग ४५०० भन्दा बढी नेपालीहरू कार्यरत छन् । यहाँ अधिकाशं नेपालीहरू सुरक्षाकर्मी, (सेक्युरिटी गार्ड) मा कार्यरत छन भने केहि सिमित नेपालीहरू ब्यापार ब्यबसाय सम्हालेर बसेका छन भने केहि अन्य पेशामा कार्यरत छन् । पूर्व–मेची देखि पश्चिम–महाकाली ऊत्तर चीनदेखी दक्षिण भारतसम्मका साथै नेपाली भाषी दार्जिलिङका मानिसहरू पनि कार्यरत छन् ।
मकाउ ३०.३ बर्ग किलो मिटरमा फैलिएको भए पनि बिश्वका सम्पन्नशाली शहर मध्यको एक मानिन्छ । दोस्रो लसभेगसको नाम बाट परिचित मकाउमा लगभग ४० को हाराहारीमा तारे होटल र क्यासिनो छन भने ती क्यासिनोमा सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली नागरीक साथै अन्य केहि देशका नागरीकलाई जिम्मा दिईएको छ ।
मकाउमा अमेरीका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरीया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेशिया,ताईवान, थाईलयाण्ड, बर्मा, भारत, चीन, मलेशीया, पोर्चुगल, नेपाल लगायत थुप्रै देशका नागरीकहरू कार्यरत छन् । बिदेशीहरू काम गर्ने कम्पनीमा होस् वा बाहिर बाटोमा भेट्दा होस् उनीहरू सभ्य र शिष्ट भाषामा बोलल्छन् । तर, हाम्रा नेपालीहरू भने एक आपसमा बस स्टप , सुपर मार्केट र बाटो पार्कहरूमा भेट्दा पनि खासै बोल्न चाहदैनन् ।
शायद मकाउ सानो शहर भएर होला जता गए पनि नेपाली भेटिन्छन् तर, यसरी भेट हुँदा सिमित नेपालीहरू मात्र बोलचाल गर्छन हैन भने कसैलाई कसैको मतलव नै हुँदैन् ।
मेरो बिचारमा मकाउमा नेपालीहरू एकाआपसमा बोल्न नरूचाउनुको पछाडी थुप्रै कारणहरू छन् ।
१–मकाउमा नेपालबाट रोजगारमा आएकाहरू सेक्यूरिटीमा भए पनि यहाँ कम्पनिहरूको आफ्नै किसिमको तलब दिने नियम छ । प्राय सबै नेपालीहरू चाहे ८ घण्टा होस् वा १२ घण्टा नै किन नहोस् सबै १ लाख भन्दा बढी पैसा कमाउछन् । डाईरेक्ट कम्पनीमा काम गर्नेहरू भन्दा सप्लायर्स कम्पनीमा काम गर्नेहरूको तलब केहि मात्रामा कमी नै छ । नेपालीहरू आ–आफ्नै तवरबाट पैसा कमाएका छन तसर्थ एकलाई अर्काको मतलब नै हुँदैन । कम्पनिमा काम गर्नेहरू सप्लायर्समा काम गर्नेहरूसँग त्यति वास्ता राख्दैनन् ।
२–मकाउमा मानिसहरूलाई डिप्रेशनमा पुराउने र एक्लो पना महसुस नहुन भौतिक साधनहरूको कमी कम्जोरी नहुँदा खासै एक्लो पना महसुस गर्दैनन् र सबै आ–आफ्नै सुरमा हुन्छन ।
३–यहा नेपालीहरू एक आपसमा खोजी निति नगर्नुको मुख्यकारक तत्व नै पैसा हो । प्रयाप्त पैसा कमाएका छन । पैसा कमाउने धुनले गर्दा नै भाईसाथी सबै बिर्सिई दिन्छन् ।
४–पैसाको धुनमा लिप्त हुदा अलिकति सामाजिक कार्यहरूमा पनि सामेल हुनु पर्छ भन्ने भावनाको कमीले गर्दा कुनै पनि संघसंस्थाको कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति जनाउदैनन् । यसरी उपस्थिति नहुँदा एक आपसमा भेटघाट नै हुदैन ,तसर्थ बाटोमा भेट्दा नेपालीजस्तो लागे पनि बोलाउने चेष्टा कसैले पनि गर्दैनन् ।
५–क्यासिनोको क्षेत्र भएका कारणले केहि नेपाली दाजुभाईहरू खेलतिर पनि आकर्षित भएका छन् । क्यासिनोमा पैसा सकिएपछि पैसाको कारोबारमा केहि समस्या आउने हुनाले नेपालीहरू एक आपसमा कारोबार सम्म गर्न रूचाउदैनन् ।
यस्तै कारणहरूले गर्दा एक नेपालीबाट अर्को नेपाली आपसमा टाढा छन् । बिश्वका सम्पन्नशाली राष्ट्रहरू अमेरीका, यूके, क्यानडा, जापान, लगायतका देशहरूमा पनि यस्तै समस्या छन भन्छन । मित्रहरू तर गल्फ कन्ट्रीमा काम गर्ने नेपालीहरूमा चाहि एकदमै भाई मिलाप छ भन्ने सुनिन्छ । त्यो कहाँ सम्म सत्य हो त्यहाका साथीहरुले जानकारी दिनुहुन्छ भन्ने आसामा छु ।
अस्ति भर्खरैको कुरा हो एक जना नयाँ भाई नेपालबाट आएका रहेछन् । सुपरमार्केटमा भेट भएको थिया, नुहाउने सावुन खोज्दै रहेछन् भाषाको समस्याले पत्ता नलाग्दा मैले नै सोधेको थिए, ‘के खोज्दै छौ ?’ हामी बीच कुराकानी भयो उनले मलाई सोधे, ‘दाई किन मकाउमा नेपालीले नेपालीलाई भेट्दा बोल्नै मान्दैन नी ?’ मैले जवाफ दिए ‘भाई मकाउको चलन नै यस्तै छ ।’
मेरो कुरा सुनेपछि उनी अचम्म परे । ‘दाजु पैसा त जसले नी कमाउलान् तर भाई साथीहरूसंग बोल्दा त के नै फरक पर्छ र बिदेशमा परिवार भने पनि जे भने पनि साथी भाई नै त हुन् उनले भने, ‘त्यसकारण एक आपसमा त भावनाको सम्बन्ध हुनु पर्ने हो नि !’ अब आउँदा दिनहरूमा भने एक आपसमा नेपाली नेपाली बीचको सम्बन्धलाई मजबुद बनाऔ । एकलाई पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने बानी बसालौ । जसले जतिनै पैसा कमाएपनी मरेर जादा जस्तो आयो त्यस्तै जाने हो , सबैलाई दाऊराले वा करेन्टलेनै पोल्ने हो दाऊरा पनी एउटै हो । पोलेंपछी बन्ने खरानी पनी एउटै हो भने किन गर्छौ घमण्ड ! आखिर मरेर लानु नै के !
सबैले हेरेर प्रतिकृया दिनु होला अन्तमा कसैको बास्तबिक जीवनमा मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ ।
पटक–पटक पुरुष र महिलाबाट बलात्कृत भएको मेरो पीडा…
पलले बुझ्नु पर्दथ्यो ‘छोरीहरु प्रयोग गर्ने वस्तु होइनन्’